မြန်မာ-နယူးဇီလန် နို့စားနွား မွေးမြူမှု ဖွံ့ ဖြိုးတိုးတက်ရေး စီမံကိန်း၏ နည်းပညာ အကူအညီ ပေးမှု - Yangon Media Group
မန္တလေး၊ အောက်တိုဘာ ၃ဝ
မြန်မာ-နယူးဇီလန် ကောင်းမွန်သောနို့စားနွားမွေးမြူမှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံကိန်းမှ နည်းပညာအကူအညီများပေးခဲ့မှုကြောင့် နို့စားနွားမွေးမြူသူများ ထုတ်လုပ်စရိတ်များလျော့ကျလာနိုင်ပြီး နည်းလမ်းမှန်သောအစားကျွေးစနစ်ကောင်းမွန်လာခြင်းကြောင့် နို့ထွက်နှုန်းကောင်းမွန်၍ ပိုမိုထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့ကြကြောင်း ယင်းစီမံကိန်းမှ သိရသည်။
အဆိုပါစီမံကိန်းကို မွေးမြူ ရေးနှင့် ကုသရေးဦးစီးဌာနနှင့် နယူးဇီလန်အစိုးရတို့ပူးပေါင်းပြီး မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ နေပြည်တော် ကောင်စီနယ်မြေ၊ ရှမ်းပြည်နယ်နှင့်စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးတို့ရှိ နို့စားနွားမွေးမြူသူတောင်သူများကို ၂ဝ၁၄ ခုနှစ်မှစတင်၍ နည်းပညာအကူအညီများပေးနေခြင်းဖြစ်သည်။
”စီမံကိန်းဒေသငါးခုမှာ နို့စားနွားမွေးမြူတဲ့တောင်သူ ၃ဝဝ ကို နည်းပညာအကူအညီတွေပေးနေပါတယ်။ တောင်သူတွေအနေနဲ့ အရင်ကထက်အစာစရိတ်တွေ လျော့ကျလာနိုင်တယ်။ အခြေခံအစာကျွေးစနစ်အတိုင်း နည်းမှန်အချိန်မှန်ကျွေးတော့ နို့ထွက်အားက ကောင်းလာတယ်။ ထွက်လာတဲ့နို့အရည်အသွေးကောင်းတော့ အရင်ကတစ်ပတ်ခံတဲ့နို့က အခုဆို ၁ဝ ရက်ခံလာတယ်။ ထုတ်လုပ်မှုလည်းမြင့်တက်လာသလို အရည်အသွေးလည်း တက်လာတယ်”ဟု မြန်မာ-နယူးဇီလန်ကောင်းမွန် သောနို့စားနွားမွေးမြူမှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံကိန်း(နေပြည်တော်)မှ ဦးစီးမှူးဒေါက်တာအောင်မျိုးသန့်က ပြောကြားသည်။
အဆိုပါစီမံကိန်းအနေဖြင့် စီးပွားဖြစ်နို့စားနွားမွေးမြူသူတောင်သူများအား အဓိကနို့စားနွားမွေး မြူနည်းပညာများသင်ကြားပေး ခြင်း၊ ခေတ်မီနို့ညှစ်စက်များအသုံး ပြုတတ်လာစေရန်၊ နို့ထွက်ကောင်းနွားမများရရှိစေရန် မျိုးကောင်းမျိုး သန့်မျိုးရေခဲချောင်းများအခမဲ့ဖြန့် ဖြူးပေးခြင်း၊ အရည်အသွေးမြင့် မြက်များကို နိုင်ငံခြားမှတင်သွင်း ကာအခမဲ့ဖြန့်ဖြူးပေးခြင်းများအား စီမံကိန်းဒေသများရှိ တောင်သူများကို အကူအညီပေးလျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။
အခွန်တံဆိပ် ကပ်နှိပ်ထားခြင်း မရှိသည့် အရက်၊ ဘီယာ၊ ဆေးလိပ်နှင့် ဝိုင်တို့ကို ရှာဖွေ သိမ်းဆည?
ဘဏ္ဍာနှစ်ကာလ အဟောင်းနှင့် အသစ်ကြားတွင် ဒေသဖွံ့ ဖြိုးရေး ရန်ပုံငွေကို ထည့်သွင်းမည် မဟုတ်ဟု လွှ?
မိုးရေထဲ၌ နှစ်နာရီကြာမျှ တေလာဆွစ်ဖ် ဖျော်ဖြေခဲ့
မြေအောက်ရထားလမ်းပိုင်းပါ ရန်ကုန်အရှေ့မှအနောက်၊ တောင်မှမြောက် မီးရထားလမ်းလုပ်ငန်း ၂၀၂၀ တွ?